Ama-beet, kanye namazambane, agcinwa kahle futhi angakwazi ukulala esiqandisini / ngesilaridi isikhathi eside. Mhlawumbe, yingakho kungenakwenzeka ukuthi kungenziwa kuwo kunamatamatisi, ukhukhamba, pepper. Noma kunjalo, isidlo se- beetroot ebusika singasiza kakhulu, uma udinga okuthile ukupheka masinyane noma nje ube nesidla. Ingasetshenziswa njengokugqoka i- borscht noma isobho sezinyosi ezibandayo, okungeziwe kuma-saladi futhi kukhona nje, ukusakazeka ngesinkwa. Ngakho-ke, sikukwazisa ukuthi ungadluli ngalolu daba, wenze ukulondolozwa. Sinikeza ukuzama ukupheka izitsha ezimbili ezimnandi kakhulu, ezitholakala ebusika "ukuphanga."
Iresiphi yokuqala ye-beetroot ukudla okulula okuyisidlo kuyinto uhlobo lwesaladi ne-pepper elimnandi. Okukhethwa kukho yisabelomali, kodwa kunomsoco kakhulu. Kuzodingeka kuye:
Ama-Beet - cishe ama-3 kg;
I-pepper yesiBulgaria (obomvu kangcono) - isisindo;
I-anyanisi - cishe i-1.5 kg.
Ngaphezu kwalezi zithako, izithako ze-marinade ziyadingeka:
Iviniga letafula - ingilazi;
Amafutha emifino - ingilazi;
I-Sugar - i-polstakana;
Amanzi - angaba ngu-300 ml;
Usawoti - izipuni ezimbili.
Lesi sibonakaliso sezinyosi ebusika sikulungele kakhulu. Umsuka kumele u-pre-selded, uhlutshiwe futhi ugayiwe kwi-grater enkulu (ungamane ube yimichilo). Sika pepper enhle zibe tincetu, kanye anyanisi - amasongo. Ephakeni elihlukile, lungiselela i-marinade - kulokhu ukuxuba zonke izithako ezibalwe ngenhla, ukubeka umlilo bese upheka, ugqugquzela. Uma ubilisa, engeza pepper kanye no-anyanisi, upheke imizuzu engu-7, bese ungadlulisela ama-beet. Konke kuhlanganiswa okweminye imizuzu engu-10. Emva kwalokho, kusele kuphela ukubeka isidlo kwizimbiza ezinenzalo futhi kuvalwe kuze kube sebusika. Akukho lutho oluyinkimbinkimbi.
Futhi i-appetizer elandelayo yezinyosi zebusika, okuyiqiniso ngokufanele ukuzama, yi-caviar. With isinkwa grey noma Borodino, udliwa kweso! Sizopheka ngesisekelo sama-kilogram wezinyosi. Uzodinga lezi zakhi:
Izaqathe - ipondo;
Utamatisi ovuthiwe - ipondo;
I-garlic - amazinyo amahlanu;
I-Apple cider uviniga - izipuni ezimbili;
Amafutha omquba - izinkezo ezintathu ezinkulu;
Usawoti nezinongo (basil, oregano, turmeric, pepper omnyama, njll) - ukunambitha.
Ama-beet nama-izaqathi angami, ahlutshiwe futhi avuliwe. Utamatisi esiwagcwalisa ngamanzi abilayo bese ususa ikhasi kubo, bese ugaye ku-blender (ungasebenzisa i-grinder inyama). I-garlic ihlanzwa futhi iqoshiwe.
E-cauldron enezansi ezinzima sishisa amafutha emifino bese siphonsa izaqathe nama-beet kuwo. I-Stew, ivuselela ngezikhathi ezithile, imizuzu engu-10. Khona-ke esikoleni baxubha utamatisi kanye negalikhi, hlanganisa konke kahle, ukumboza ngesembozo bese upheka imizuzu engu-20. Konke sekuphelile - uthele uviniga, engeza usawoti, izinongo. Sipheka eminye imizuzu engu-7. Manje i-assortment yethu yemifino ikhihliziwe futhi ifakwe esimweni somfaniswano wamaqanda ku-blender. I-appetizer yesibili ye-beet ebusika ilungile. Sifaka emitsheni bese sivale ngezingubo zepulasitiki. Hlala endaweni epholile.
Lapha singathola amabhontshisi anjengokwenziwe ebusika. I-billet yokuqala inhle ukwengeza lapho ulungiselela izitsha: isobho, amazambane nemifino noma inkukhu. Futhi lesibili esiphundu sinjengaleyo - ngesinkwa esimhlophe esisha noma se-Borodino. Ubusika buzojabulisa ngokwengeziwe ngokudla okumnandi, okunomsoco nokuphephile. Ngaphezu kwalokho, bazophekwa ngezandla zabo.
Jamu kusuka kuma-apula nezinye izithelo
Ama-pancake anamnandi kwi-yogurt
I-Wave (amakhowe): ukulungiselela izitsha zokunisela umlomo okunomsoco
Bright kwekhanda ngesiGreki ku eside izimfihlo kwekhanda